KARATRA ARA-LINE - Ningbo Zhongtong elektrika Co., Ltd
TE fifandraisana Ltd. dia multi-lavitrisa dolara mpitarika maneran-teknolojia. Ny fifandraisana sy ny orinasa sensor vahaolana no zava-dehibe eto amin'ity izao tontolo izao izay miha mifandray. TE collaborates amin'ny injeniera hanova foto-kevitra ho famoronana - redefining inona no azo atao amin'ny fampiasana manan-tsaina, mahomby sy avo-TE fanaovana vokatra sy ny vahaolana henjana voaporofo amin'ny tontolo. TE mpiara-miasa amin'ny mpanjifa ao amin'ny firenena maherin'ny 150 isan-karazany manerana ny orinasa. Isaky ny fifandraisana zava-dehibe.
Molex , naorina tamin'ny 1938, no iray amin'ireo lehibe indrindra manerana izao tontolo izao maneran-interconnect mpanamboatra ny vokatra. Molex mamorona vokatra vaovao vahaolana ho an'ny tariby-to-tariby, tariby-to-birao, ary ny birao-to-birao connectors, anisan'izany ny lohapejy, backplane, alalan'ny terminal,-pifandraisan-davitra, ethernet, sy cable, ary koa ny fampiharana tooling. Molex ny ezaka mba hampihena ny fiantraikan'ny tontolo iainana ny asa aman-draharaha, vokatra, sy ny tolotra dia hita taratra eo amin'ny fanoloran-tena ny rafitra fitantanana ny tontolo iainana, ECOCARE.
JST manome maro samihafa ny fifandraisana fiadiana wiring rafitra natao manokana ho an'ny fiara tsena ampahany. JST manavaka ny tenany amin'ny hafa any an-tsaha amin'ny fanomezana fifandraisana rafitra izay matetika orinasa mihoatra ny fenitra momba ny antonona, endrika sy miasa. JST ny vokatra dia hita ao amin'ny fiara rehetra manerana rafitra fampiharana isaky ny fiara OEM tsipika manerantany. Amin'ny alalan'ny fisafidianana ny JST rafitra connection ianao miantoka ny fahombiazana amin'ny lafiny rehetra ny famolavolana sy ny orinasa mpamokatra entana dingana
Hirose Electric Company specializes amin'ny fanamboarana ny connectors ary efa ho mpandray anjara amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny elektronika nandritra ny 70 taona. Ny tsotra sy manetry tena fandraharahana filozofia ny mitady fahendrena avy amin'ny loharanom-baovao rehetra sy ny fampidirana izany fahalalana foana ambony kalitao sy ny fahombiazan'ny efa nahazo ny hatsaram-panahy feno Hirose mpanjifa fototra. Hirose koa nanao ny tontolo iainana ao amin'ny fanamboarana ny connectors toy ny coaxial connectors, FFC / FPC connectors, ary tokan-tena ary ny andalana roa connectors.
Bosch sy ny fitaovana mifandray Solutions , dia nanana tanteraka ny Robert fanampiny Bosch GmbH, dia manangana sy ny tsena vaovao sy ny fitaovana mifandray Tailor-nanao vahaolana ho an'ny ny Internet-javatra (IoT). Bosch mifandray fitaovana sy voalamina tsara Solutions manome vokatra elektronika sy ny rindrambaiko traikefa izay manao fitaovana sy zavatra manan-tsaina sy ny tranonkala-alefa.
Delphi Connection Systems dia izao tontolo izao mpitarika eo amin'ny famatsiana herinaratra sy ny elektronika fiara fizarana ny rafitra, miaraka amin'ny manan-tsahala malaza eo amin'ny famolavolana, fampandrosoana, ary ny fanamboarana ny herinaratra sy ny elektronika sy ny rafitra fitaovana fifandraisana. Fa mihoatra ny 100 taona, Delphi no nifantoka tamin'ny manome vokatra lehibe kokoa fampisehoana sy ny teknolojia fiara rahampitso. Packard Electric dia azony ny Delphi Connection Systems tamin'ny 1995.
Yazaki Corporation dia tsy miankina fiara singa Mpanao naorina tamin'ny 1941. Ary koa fiara tariby ampondra, ny vokatra fototra ho an'ny izay andidiako ambony anjara amin'ny maneran-tsena, mampitombo sy ny fanamboarana metatra, singa elektronika sy ny vokatra hafa maro be ho an'ny fiara ampiasaina.
Sumitomo Wiring Systems milalao ny anjara tamin'ny famoronana fiaraha-monina manankarena amin'ny teknolojia sy ny vokatra ambony kalitao.
Avy fiara wiring ampondra, fototry ny raharaham-barotra, ny herinaratra fiara sy ny fiara safiotra singa, singa elektronika sy ny maro hafa, dia manolotra entana izay hamaly ny hetahetan'ny tontolo izao.